Semalt विशेषज्ञ: पुरानो साइटम्यापलाई क्रलिंगबाट गुगललाई रोक्नका लागि मार्गनिर्देशन
तपाईंको वेबसाइट बढ्दै जाँदा, तपाईं यसको दृश्यता र इन्टरनेटमा विश्वसनीयता सुधार गर्ने उपायहरू फेला पार्न सक्दो प्रयास गर्नुहुनेछ। कहिलेकाँही, कसरी हाम्रो साइटहरू काम गर्ने को प्रभाव पछाडि रहन्छ, र यो जहाँ हामी ध्यान दिनु पर्छ।
Google लाई पुरानो साइटहरू क्रल गर्नबाट रोक्नको लागि Semalt को ग्राहक सफलता प्रबन्धक, म्याक्स बेलबाट निम्न सुझावहरूको तल जानुहोस्।
केही हप्ता अघि, मेरो एक ग्राहकले मलाई भने कि उसको ई-वाणिज्य वेबसाइट छ। यो विभिन्न परिवर्तनहरू मार्फत गयो: यूआरएल संरचनाबाट साइटम्याप, सबै साइट परिमार्जन गर्न परिमार्जन गरियो।
ग्राहकले आफ्नो गुगल खोजी कन्सोलमा केहि परिवर्तनहरू देख्यो र त्यहाँ क्रल त्रुटिहरू फेला पारे। उसले के देख्यो कि त्यहाँ ठूलो संख्यामा पुरानो र नयाँ यूआरएलहरू छन् जुन नक्कली ट्राफिक उत्पन्न गर्दै थिए। ती मध्ये केहीले, पहुँच अस्वीकृत 3०3 र फेला परेन 40०4 त्रुटिहरू देखाउँदै थिए।
मेरो ग्राहकले मलाई भन्यो कि उसको सब भन्दा ठूलो समस्या पुरानो साइटम्याप थियो जुन रूट फोल्डरमा रहेको थियो। उहाँको वेबसाइटले गुगल एक्सएमएल साइटम्याप प्लगइनहरू बिभिन्न प्रकारको प्रयोग गर्‍यो, तर अब यो योमस्टले साइटम्यापका लागि WordPress एसईओमा निर्भर रह्यो। बिभिन्न पुरानो साइटम्याप प्लगइनहरू, यद्यपि, उहाँका लागि गडबड सिर्जना गर्नुभयो। तिनीहरू साइटम्याप.एक्सएमएल.gz नामको मूल फोल्डरमा उपस्थित थिए। किनकि उसले सबै पोष्टहरू, पृष्ठ कोटीहरू र ट्यागहरूका लागि साइटम्यापहरू सिर्जना गर्न योआस्ट प्लगइनहरू प्रयोग गर्न सुरु गरेको हुनाले, उसलाई अब यी प्लगइनहरू आवश्यक पर्दैन। दुर्भाग्यवस, व्यक्तिले गुगल खोज कन्सोलमा साइटम्याप.एक्सएमएल.gz बुझाउनु भएन। उसले केवल आफ्नो योस्ट साइटम्याप पेश गरेको थियो, र गुगलले पनि आफ्नो पुरानो साइटम्याप क्रल गरिरहेको थियो।
के क्रल गर्न?
व्यक्तिले पुरानो साइटम्यापलाई रूट फोल्डरबाट हटाएन, त्यसैले त्यो पनि अनुक्रमित हुँदैछ। म उहाँसँग फिर्ता आएँ र मैले वर्णन गरें कि साइटम्याप खोज ईन्जिन नतीजाहरूमा क्रल गर्नु पर्ने कुरा मात्र हो। तपाइँ सायद सोच्नुहुन्छ कि पुरानो साइटम्यापहरू मेटाउनाले Google लाई डिफन्ट युआरएल क्रॉल गर्नबाट रोक्छ, तर त्यो सत्य होइन। मेरो अनुभवले भन्छ कि गुगलले दिनको धेरै पटक हरेक पुरानो यूआरएल लाई अनुक्रमणिका गर्ने प्रयास गर्दछ, making० errors त्रुटिहरू वास्तविक हुन् र कुनै दुर्घटना होइन भनेर।
गुगलबोटले पुरानो र नयाँ लिंकहरूको मेमोरी भण्डार गर्न सक्छ जुन यसले तपाईंको साइटको साइटम्यापमा फेला पार्नेछ। यो नियमित अन्तराल मा तपाइँको वेबसाइट भ्रमण गर्दछ, प्रत्येक पृष्ठ सही अनुक्रमित छ भनेर पक्का गर्दै। Googlebot ले मूल्या to्कन गर्न को लागी प्रयास गर्दछ यदि लिंकहरू वैध वा अमान्य छन् कि आगंतुकहरूले कुनै समस्या अनुभव गर्दैनन्।
यो स्पष्ट छ कि वेबमास्टरहरू भ्रमित हुने छन् जब तिनीहरूको क्रल त्रुटिहरूको संख्या बढ्छ। तिनीहरू सबै एक ठूलो हदसम्म यसलाई कम गर्न चाहन्छन्। सबै पुरानो साइटम्यापहरू बेवास्ता गर्न गुगललाई कसरी सूचना दिने? तपाईं सबै अनावश्यक, र अनौठो साइटम्याप क्रोलहरू मार्फत त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले, यो सम्भव बनाउनको लागि मात्र तरिका .htaccess फाईलहरू थियो। हामीलाई केही प्लगइनहरू प्रदान गर्नका लागि WordPress लाई धन्यवाद।
वर्डप्रेस वेबसाइटहरूसँग तिनीहरूका मूल फोल्डरहरूमा यो फाईल छ। त्यसो भए तपाईले FTP पहुँच गर्नु पर्छ र cPanel मा लुकेका फाइलहरू सक्षम पार्नु पर्छ। तपाईंको आवश्यकता अनुसार यो फाइल सम्पादन गर्न फाईल प्रबन्धक विकल्पमा जानुहोस्। तपाईंले यो बिर्सनुहुन्न कि यसलाई गलत रूपमा सम्पादन गर्दा तपाईंको साइटलाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ, त्यसैले तपाईं जहिले पनि सबै डाटा जगेडा गर्न सक्नुहुनेछ।
एकचोटि तपाईंले फाईलमा स्निपेट थप्नुभयो, सबै म्याद सकिएका यूआरएलहरू तपाईंको क्रल त्रुटिहरूबाट कुनै समयमै हराउनेछ। तपाईंले यो बिर्सनु हुँदैन कि गुगलले तपाईंको साइटलाई लाईभ राख्नको लागि चाहन्छ, decre०4 त्रुटिको सम्भावना घटाउँदै।